eyelashes Long - iphupho zonke ntombazane, futhi ukufeza ukugcwaliseka leliphupho, ukuthi nje zama hhayi ukwenza abesifazane zanamuhla ekusebenziseni uwoyela ocolisekileyo ku nemivimbo engu ukwakha izinwele yokufakelwa. Namuhla sibheka izindlela "Kareprost", ukubuyekezwa zazo Ugcwalise Inthanethi futhi ukhathazekile ukuguquguquka kwakhe. Ngakho kungaba kuyindlela yokuthola ngempumelelo futhi ukuthi kukhona side effects?
Umsuka "Kareprost" izidakamizwa (bimatoprost)
Eqinisweni, lezi isimangaliso lehla - hhayi ukuthi abanye, njengendlela ekwelapheni glaucoma iso, okusho zamehlo. Nomphumela omangalisayo phezu eyelashes waphawula kwasekuqaleni, iziguli emitholampilo amehlo futhi odokotela babo: emva usebenzisa ithuluzi efanayo, abantu babe eside futhi mkhulu eyelashes, okuyiwona Yambamba engumthengisi kunodokotela, cosmetologists.
Manje, lokhu izidakamizwa isibe ngempela "igolide" ngentengo, futhi ibekwe njengoba ithuluzi eyelashes ezikhulayo namashiya, abe ambalwa ontanga yakhe, kodwa ngaso enhliziyweni lehla "Kareprost" ingxenye uhlale afanayo: ekhona ama-hormone bimatoprost ukukhula. Kubonakala ukuthi abesifazane kufanele bangabi eduzane nokwenziwa, kubonakala uyinto engenakwenzeka - nemivimbo engu zemvelo, owakhula cishe bebodwa.
Umthelela emitholampilo ye-ejenti "Kareprost": umthengi ukubuyekezwa, ukusetshenziswa
ozokusebenzisa kuthinta ama izinwele okuqinisekisa ukukhula futhi isikhathi eside ekuphileni we cilia kakhulu. Eqinisweni, lokhu kusho ukuthi esikhundleni cilium lahoxiswa ngemuva kwamasonto ambalwa ngemva kokuzalwa kwakhe, lihlale endaweni futhi liyaqhubeka likhula izinyanga 2. Ngakho, siphendvula yombuzo amakhasimende kuqala kungani ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngemuva eyelashes kokuphazamiseka ukubuyela esimweni saso sangaphambilini.
Kusho okumele asetshenziswe kuphela kulezo zindawo lapho ohlela ukwandisa "enoboya", njengoba ikhambi namanje lapho kuvusa izinwele ama, futhi abanakho, Ngiyaxolisa, zitholakala wonke umzimba. Qaphela uma sisebenzisa izindlela, sebenzisa nokokuyifaka mncane eliza amathonsi lokho kusho ngokunembile kwesigameko izimpande cilia namashiya, kanye hhayi ukuba kumkhathaze ukukhula izinwele phakathi kwekhulu, noma ebunzini. Kwakuyisenzo esasibonisa Impendulo yombuzo wesibili abasebenzisa izidakamizwa "Kareprost" izibuyekezo walandisa umphumela ongaziwa. Eqinisweni, lena akuyona kulokho akubiza ngokuthi "zonke iziboya emzimbeni" izingxenye okungafunwa, ongesiye isicelo ngokucophelela izindlela bese wageza ngayo izindawo sinqatshelwe. ufunde imiyalelo ngokucophelela!
Imiphumela engemihle namathuluzi ukukhula engokwemvelo eyelashes "Kareprost": impendulo nokusikisela
Chaza ezifana izidakamizwa enqabayo ukuphendula esekelwe bimatoprost njengoba ukulunywa, singagqunqi we -cornea, ububomvu kanye isikhumba ukuhwalala. Ngentshisekelo Ungafunda mayelana imiphumela emibi yimuphi izidakamizwa yokwelapha, isibonelo, "aspirin", "Analgin" noma efanayo ukucabangela imali kusuka glaucoma kanye nokuvuselelwa nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa emehlweni: bona bonke aqukethe nezimpawu ezifanayo noma ezingathandeki nakakhulu, kodwa ukuthi uwasebenzise kancane hhayi steel.
Ukuze uqale nge sikhumbula ukuthi side effect of bimatoprost kubonakele ku 4% abathengi, futhi lesi sibalo hhayi sendawo, abantu abaningi abane-izici ezithile emzimbeni ukuthi ungathathi hormone, kodwa kuzofuneka ukuthi uhlole kahle indlela ukusebenzisa lolu izidakamizwa. Cishe, kwakukhona okungahambi, okungukuthi, ukuthola yona yeso futhi okubangela amaconsi phesheya ngolaka umugqa. Zama qaphela nale ukulungiselela ephezulu ukucacisa futhi silisebenzise ngokuqinile ngokusho imiyalelo.
ngakho kukhona isici ekulungiseleleni "Kareprost", ukubuyekezwa zazo namuhla siye sazama ukuhlola ngesineke futhi ahlaziye, kuba umthetho elula: "Ningayi amalawulo!", okusho ukuthi uma ukhohlwa namuhla kubangele ukwehla ekukhuleni eyelashes, awudingi kusasa akha futhi ukwandisa isilinganiso semithi oyidlayo noma inombolo kwezicelo ngosuku. Lokhu kufana poro yini baxabane engathandeki.
Ngokuvamile, lesi sidakamizwa "Kareprost" okuhle ngokwanele ukuyisebenzisa, uma ukhumbula mayelana imithetho isicelo futhi uhambisane ngesilinganiso. Ake nemivimbo engu akho bazothola obuphelele oyifunayo ngaphandle imiphumela emibi, futhi iholo kwanele imikhiqizo yekhwalithi enhle, ngokudlula okusuke ezishibhile!
Tunisia, Tergui Club 3 *: Izibuyekezo
Dzhon Rokfeller. Ibhizinisi nokuphila kwangasese